टोकियोमा गर्न उत्तम चीजहरू: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney आदि - Best of Japan
टोकियो, जापान मा Shibuya क्रसिंग = एडोब स्टक
टोकियो जापानको राजधानी हो। जबकि परम्परागत संस्कृति अझै बाँकी छ, समकालीन नवीनता निरन्तर भइरहेको छ। कृपया आउनुहोस् र टोकियो भ्रमण गर्नुहोस् र ऊर्जा महसुस गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म पर्यटन क्षेत्रहरू र टोकियोमा विशेष गरी लोकप्रिय दर्शनीय स्थलहरूको परिचय दिनेछु। यो पृष्ठ धेरै लामो छ। यदि तपाईं यो पृष्ठ पढ्नुहुन्छ भने, तपाईं टोकियोमा सबै मुख्य दर्शनीय ठाउँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको रुचिको क्षेत्र हेर्न कृपया तल सामग्रीको तालिका प्रयोग गर्नुहोस्। तलको दायाँ तिर एरो बटन क्लिक गरेर तपाईं यस पृष्ठको शीर्षमा फर्कन सक्नुहुनेछ। मैले सम्बन्धित लेखहरूमा लिंकहरू संलग्न गरें, त्यसैले यदि तपाईंसँग तपाईंको रुचिको क्षेत्र छ भने, कृपया सम्बन्धित लेखहरू पनि पढ्नुहोस्।
>> तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ? तल भिडियो मा दूरी मा फुजी? <
जब म एउटा अखबारको कम्पनीमा काम गर्दै थिएँ, म मेरो सहकर्मी फोटोग्राफरसँग अखबारको हेलिकप्टरमा धेरै चोटि टोकियो उडें। आकाशबाट देखिएको टोकियो आश्चर्यजनक रूपमा विशाल छ। माउन्ट फुजी दूरीमा देख्न सकिन्छ। टोकियो मा धेरै हेलिकप्टर को दर्शनीय सेवाहरु छन्। तपाई किन हेर्नुहुन्न ...
टोकियो एक रात्रि दृश्यको साथ एक शहर हो। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई टोकियोमा सब भन्दा सुन्दर रात दृश्यहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। स्थानमा निर्भर गर्दछ, जस्तै Shinjuku मा टोकियो मेट्रोपोलिटन सरकारी कार्यालय को आसपास, टोकियो स्टेशन को वरपर, इन्द्रेणी पुल, रात को ...
टोकियो को रूपरेखा
टोकियो स्काइट्री (ओशिएज)
Yanesen: Yanaka, Nezu, सेंडागी
इम्पीरियल प्यालेस (टोकियो)
टोकियो टावर (कामियाचो)
Shinjuku Gyoen राष्ट्रीय उद्यान
मेजी जिंगु तीर्थ
टोक्यो डिज्नी रिसोर्ट (मैहामा, चिबा प्रान्त)
JR ट्रेनको नक्शा
यदि तपाईं टोकियो आउनुभयो र ट्रेन वा बस विन्डोबाट टोकियोको ल्यान्डस्केप देख्नुभयो भने तपाईं अचम्मित हुनुहुनेछ कि यो एकदम विशाल शहर हो। २० औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि टोकियो शहरको विस्तार भइरहेको छ र परिणाम स्वरूप यो योकोहामा, सैतामा र चिबा जस्ता वरपरका शहरहरूमा सामेल भयो। परिणाम स्वरूप, टोकियोमा केन्द्रित टोकियो महानगर (मेगा शहर) अब जन्म भएको छ। टोकियो महानगरको जनसंख्या लगभग 20 करोड .० लाख पुगेको छ।
यस मेगासिटीमा जेआर (पूर्व राज्यको स्वामित्वको रेलमार्ग), निजी रेलवे, सबवेको नेटवर्क छ। हरेक ट्रेन धेरै सटीक सेकेन्डमा चल्दछ। व्यक्तिहरू यी ट्रेनहरूको प्रयोग गरेर सक्रिय रूपमा बाँचिरहेका छन्। यदि तपाईं टोकियो आउनुभयो भने, कृपया यो मेगासिटीको शक्ति महसुस गर्नुहोस्।
टोकियो एक पछि अर्को नयाँ पप संस्कृति उत्पादन गर्ने शहर हो। उही समयमा, टोकियो एक सहर हो जहाँ परम्परागत मन्दिरहरू र मन्दिरहरू अझै अवस्थित छन्। यो द्वैद्व टोकियोको प्रमुख विशेषता हो। टोक्योमा, कृपया दुवै नवीन पप संस्कृति र परम्परागत जापानी परम्परागत संस्कृतिको आनन्द लिनुहोस्।
टोकियोमा, त्यहाँ ठाउँहरू छन् जुन प्रकृतिमा प्रचुर मात्रामा छन् जस्तै इम्पीरियल प्यालेस, शिन्जुकु ग्योएन पार्क र मेजी जिन्गु। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईले यो स्थानको यस ठाउँमा मौसमी परिवर्तन महसुस गर्नु पर्छ।
* जब टोकियो मा यात्रा, यो मेट्रो प्रयोग गर्न सजिलो छ। टोकियो मेट्रोको आधिकारिक वेबसाइट हो यहाँ.
म तपाइँलाई पहिले Asakusa मा परिचय गराउन चाहान्छु। किनभने Asakusa एक शहर हो जहाँ तपाईं पुरानो परम्परागत जापानी संस्कृतिको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पहिले Asakusa जानुभयो भने, तपाईंले जापानमा आएको जस्तो महसुस गर्नुहुनेछ।
विगतमा, टोकियो पहिले पूर्व पक्षबाट विकसित भएको छ। यस कारणले टोकियोको पूर्वी भागमा धेरै परम्परागत मठहरू, मन्दिरहरू, शहरहरू छोडियो। Asakusa पूर्वी क्षेत्र मा एक विशिष्ट शहर हो।
सेन्सोजी मन्दिर Asakusa प्रतिनिधित्व गर्ने एक ठूलो मन्दिर हो (र टोकियो प्रतिनिधित्व गर्दै)। यो सातौं शताब्दीको पहिलो आधामा स्थापित भएको थियो र लामो समयदेखि टोकियोका नागरिकहरूलाई परिचित छ।
Asakusa स्टेशन (सबवे, तोबु स्काइट्री लाइन, सुकुबा एक्सप्रेस) बाट लगभग minutes मिनेट पैदल, सेन्सोजी मन्दिरको अगाडि ठूलो गेट छ, जसरी तलको चित्रमा देखाइएको छ। यो धेरै प्रसिद्ध गेट हो जसलाई "कामिनारिमन" भनिन्छ। यस ढोकाको दायाँ पट्टि हावाको देवता (फुजिन) को मूर्ति छ, बायाँमा गर्जनका देवता (राईजिन) को मूर्ति छ। दुबै एक धेरै डरलाग्दो अनुहार छ। र बीचमा एक विशाल लालटेन छ।
यस फाटकमा जानुहोस् र साना सडकहरू साना पसल "Nakamise" को साथ पछि। स्मारिका र जापानी सडक फूडहरू १०० भन्दा बढी पसलहरूमा प्रदर्शन हुन्छन्। यस जीवन्त नाकामिसे पछि, त्यहाँ माथिल्लो चित्रमा देखिएझैं होजमोन भनिने एक ठूलो ढोका छ। त्यसको पछाडि सेन्सोजी मन्दिरको मुख्य हल छ। माथिको फोटोमा देखिएझैं त्यहाँ पाँच तले पागोडा पनि छ।
जब तपाई सेन्सोजी मन्दिर जानुहुन्छ, तपाईले देख्नुहुनेछ कि यस मन्दिर वरिपरिका धेरै किनमेल सडकहरू र भवनहरू छन्। सेन्सोजी लामो समयदेखि टोकियोको शहरमा थिए र सधैं टोकियोका नागरिकहरूको नजिकमा थिए। यो सेन्सोजीको ठूलो सुविधा हो।
सेन्सोजी मन्दिरको अगाडि कामिनरिमोन ढोका जुन टोकियो, जापानको असकुसामा पर्यटकहरूले भरिएको छ = शटरस्टक
टोक्यो स्कायट्री, जापानमा सब भन्दा उच्च स्वतन्त्र संरचना, टोक्यो क्षितिज = शटरस्टकको दृश्य
यदि तपाईं Asakusa मा हिड्दै हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो अगाडि एक टेलिभिजन प्रसारण टावर देख्न सक्नुहुन्छ। यो टोकियो स्काइट्री हो।
टोकियो स्काइट्रीको उचाई 634 828 मीटर छ। यो प्रसारण टावरको रूपमा संसारमा सब भन्दा माथि छ। एक कृत्रिम भवनको रूपमा, दुबईको बुर्ज खलीफामा 350२450 मिटर पछि यो विश्वको दोस्रो सबैभन्दा उच्च हो। टोक्यो स्काइट्रीमा, तपाईं पहिलो अवलोकन फ्लोर (350 4० मिटर उचाइ) र दोस्रो अवलोकन फ्लोर (उचाई XNUMX० मिटर) मा जान सक्नुहुन्छ, जुन जमिन माथि th फ्लोरबाट XNUMX XNUMX० मिटर अग्लो छ। अवलोकन फ्लोरबाट तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फुजी, टोक्यो खाडी र यस्तै। तपाईंले पृथ्वी गोलो महसुस गर्नुहुनेछ। पहिलो अवलोकन फ्लोरमा त्यहाँ कुना पनि छ जहाँ भुइँ शीलाइट छ र तपाईं भूमिगत देख्न सक्नुहुन्छ।
टोकियो स्काइट्री संग "टोकियो स्काइट्री टाउन" भनिने पर्यटन र व्यावसायिक सुविधा छ। तपाईं यहाँ किनमेलको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ एक्वैरियम पनि छ, तपाइँ पेन्गुइनहरू भेट्न सक्नुहुन्छ।
टोक्यो स्काइट्रीको नजिकको स्टेशनहरू टोकियो स्काइट्री स्टेशन (टोबु टोक्यो स्काइट्री लाइन) र ओशियाज स्टेशन (हन्जोमोन लाइन, केसीई लाइन, तोइइ असकुसा लाइन) हो। जुनसुकै स्टेशनबाट तपाईं ओर्लनुभयो भने, तपाईंको अगाडि टोकियो स्काइट्री छ।
यदि तपाईं Asakusa मा दर्शनीय स्थलहरु मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो लगभग u मिनेट तोबु Skytree लाइन मा Asakusa स्टेशन बाट टोकियो Skytree स्टेशन को लागी लिन सक्दछ।
>> टोक्यो स्काइट्रीको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
टोक्यो, जापानमा मानिसहरू होतालुना टूर क्रूज डु ride्गामा सवार भए। टोकियो जापानको राजधानी शहर हो। यसको मेट्रो क्षेत्र = शटरस्टकमा .37.8 XNUMX..XNUMX मिलियन मानिस बस्छन्
टोकियो क्रूज एक पानी बस हो जुन असकुसाबाट सुमिदा खोलाबाट टोकियो खाडीको पर्यटक स्थलहरू जस्तै हमारीकियु, हिनोद पियर, ओडाइबा कैहीन कोएन, टोकियो बिग साइट र टोयोसुसम्म जान्छ। जहाज लगभग १०० व्यक्तिको सवारी गर्न पर्याप्त ठुलो छ, र माथिको फोटोमा देखिएझैं भविष्य प्रकारको डिजाइन दिइएको छ।
एक पटक टोकियो "पानीको राजधानी" थियो। सुमिदा नदी र टोकियो खाडीमा त्यहाँ थुप्रै जहाजहरू सञ्चालन भए। त्यस पछि सुमिदा खोलामा रेडेमेन्ट कार्य गरियो। एक पटक जस्तो प्राकृतिक परिदृश्यहरू हराए। यद्यपि जहाजको विन्डोबाट टोकियोको दृश्य धेरै नै ताजा छ। सुमिदा नदीमा पुलको डिजाइन र डिजाइनहरू छन्। जब तपाईंको जहाज टोक्यो खाडीमा आउँछ, तपाईं विशाल दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। म कहिले काँही यो टोकियो क्रूज प्रयोग गर्छु जब म Asakusa मा जान्छु। जहाज ट्रेनहरू भन्दा ढिलो छ, तर यो रमाईलो समय हो।
यो Asakusa बाट Hinode Pier मा हरेक मार्ग लगभग minutes० मिनेट छ। जहाज लगभग minutes० मिनेटको अन्तरालमा संचालित हुन्छ।
>> टोक्यो क्रूजको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
Ueno पूर्वी टोकियो मा एक ठूलो शहर हो। Ueno मा, लगभग 530,000०,००० वर्ग मीटरको आकारको Ueno पार्क फैलदैछ। यो पार्क यसको चेरी फूलहरूको लागि प्रसिद्ध ठाउँ भनेर चिनिन्छ, र यो वसन्तमा धेरै चेरी खिलने दर्शकहरूको भीडले भरिन्छ। पार्कको पछाडि प्यानस र हात्ती जस्ता जनावरहरूको साथ प्रसिद्ध उनो चिड़ियाघर छ।
यसबाहेक, यूनो पार्कसँग जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने संग्रहालयहरू छन्। उदाहरण को लागी, त्यहाँ टोकियो राष्ट्रिय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, पश्चिमी कला को राष्ट्रीय संग्रहालय, र टोकियो महानगर कला संग्रहालय छ। त्यहाँ टोकियो बन्का कैकान पनि छन्, जहाँ प्रसिद्ध कन्सर्टहरू र अन्यहरू आयोजना गरिन्छन्।
JR Ueno स्टेशन बाट JR Okachimachi स्टेशन सम्म रेल उचाइको अन्तर्गत, "Ameyoko (Ameya-Yokocho)" भनिने एक किनमेल जिल्ला करिब 500०० मिटरको लागि जारी छ। यो ठाउँ विदेशबाट आएका पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। Ameyoko मा लगभग 400 साना पसलहरु छन् कि विभिन्न सामान सस्तोमा बेच्छन्, ताजा खाद्य पदार्थ देखि कपडाका आइटमहरुमा यदि तपाईं अमेयोको वरिपरि टहलनुभयो भने, तपाईं खजानाको खोजीमा भए जस्तो रमाईलो महसुस गर्नुहुनेछ।
Ueno स्टेशन JR को मुख्य स्टेशन हो, टोकियो स्टेशन र Shinjuku स्टेशन को साथ लाइन। यसबाहेक, Ueno मा Keisei इलेक्ट्रिक रेलवे Ueno स्टेशन सीधा नरिता एयरपोर्ट जान्छ। Ueno शिबुया र Shinjuku को रूप मा फेसनदार छैन, तर यो एक बौद्धिक र धनी प्राकृतिक डाउनटाउन हो। मलाई लाग्छ कि योनोको वरपर बस्नु राम्रो विचार हो किनभने होटलको टोक्यो स्टेशन क्षेत्र भन्दा सस्तो छ।
>> Ueno को विवरणको लागि कृपया यस वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस्
रिकुगेन गार्डन, टोकियो, जापान = शटरस्टकमा शरद रोशनी
यदि तपाईं टोकियोको सुन्दर जापानी बगैंचाको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, JR Yamanote लाइन / टोकियो मेट्रो Namboku लाइन को "Komagome" स्टेशन नजिक Rikugien जानुहोस्।
रिकुगेन एउटा बगैंचा हो जुन १1702०२ मा योशियसु यानगाइसवाले निर्माण गरेको थियो, जो त्यस समय एक शक्तिशाली डेम्यो (सामन्त प्रभु) थिए। बगैंचामा पहाडबाट तपाईं सम्पूर्ण रिकुगेनलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वसन्त र शरद theतुमा रूखहरू प्रज्ज्वलित हुन्छन्।
तपाईं तलको पृष्ठमा धेरै Rikugien फोटोहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
मान्छे Yanesen बजार जापान को पुरानो व्यापार जिल्ला बजार - साँझको प्रकाश = शटरस्टक
तोरी, शिन्टो पवित्र गेट नेजु श्राइन वा नेजु जिन्जा, परम्परागत र ऐतिहासिक स्थल, जापानी सरकारले एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पत्तीको रूपमा दर्ता गर्‍यो = शटरस्टक
यदि तपाईं टोकियोको परम्परागत शहर वातावरणमा आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई "Yanesen" अन्वेषण गर्न सिफारिस गर्दछु।
यानेसेन यूनोको पूर्वतिर फैलिएको क्षेत्र हो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा, तीन जिल्लाहरू "यानाका" "नेजु" "सेन्डागी" सामूहिक रूपमा Yanesen भनिन्छ।
यी क्षेत्रहरू दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा हवाई आक्रमणको क्षतिबाट चमत्कारी ढंगमा उम्कन सकेका छन्। थप रूपमा, यी तीन जिल्लाहरू युद्ध पछि बृहत् विकासबाट बचिए, त्यसैले "पुरानो जापान" बाँकी छ।
हालसालै, किराना स्टोर र क्याफेहरूको स this्ख्या जुन यस प्रकारको वातावरणसँग मिल्छ। त्यस्ता पसलहरू रोक्दा धेरै विदेशी पर्यटकहरू घुम्दै छन्।
Yanesen मा सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण Yanaka Ginza हो। यो यानाकाको १ 170० मिटरको पुरानो किनमेल सडक हो। यदि तपाईं यानाका जिन्जा हिड्नुभयो भने, तपाईं समयलाई पुरानो जापानी संसारमा पर्न सक्नुहुन्छ। Yanaka Ginza माथिको तस्वीरमा देखिए अनुसार सीढीहरू छन्। तपाईं किन यो सीढीमा बस्नुहुन्न र आराम गरेर जापानी शहरको वातावरणको आनन्द लिनुहुन्न?
>> Yanaka को विवरण को लागी, नेजु कृपया यस वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस्
>> यानाका जिन्जाको आधिकारिक वेबसाइट (जापानीज मात्र) यहाँ छ। चित्रहरु प्यारा छन्!
टोकियोमा शरद leavesतुका पातहरू सहित त्यहाँ धेरै रूखहरूको साथ लाइनहरू छन्। सबै भन्दा प्रसिद्ध Jingu Gaien छ। मलाई Gaien को एवेन्यू मन पर्छ। यद्यपि मलाई युनिभर्सिटी अफ टोकियोको होo्गो क्याम्पसको अवसर पनि मन पर्छ। टोकियो विश्वविद्यालय एक ठाउँ हो जहाँ सर्वश्रेष्ठ विद्वान र विद्यार्थीहरू भेला हुन्छन् ...
रोगोगु पूर्वी टोकियोमा रयोगोकु पुल वरपरको शहर हो। यहाँ कोकुगीकन छ जुन सुमो रेसलिंगको लागि भव्य ठाउँ हो। त्यसो भए, यस छिमेकमा तपाई सुमो रेसलरको हिड्नको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्षेत्र धेरै समय पहिले शहरको रूपमा विकसित भयो, त्यसैले यदि तपाईं हिंड्नुभयो भने, तपाईं जापानको पुरानो शहरको परिदृश्यमा तान्न सक्नुहुनेछ।
Kokugikan = Sumo हेर्दै
रियोगोकु कोकुगीकन, रियगोकु सुमो हल भनेर पनि चिनिन्छ, यो इनडोर खेल मैदान हो जुन सुकोडाको योकोमामी नजिकै रहेको छ = शटरस्टक
जब तपाईं JR Ryogoku स्टेशनमा पुग्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो अगाडि विशाल भवन देख्न सक्नुहुन्छ। भवनको वरपर धेरै झण्डा अड्किएका छन्। सुमो पहलवानहरू कहिलेकाँही वरिपरि छन्। यो Kokugikkan हो।
कोकुगीकन एक इन्डोर प्रकारको खेलकुद सुविधा हो जुन करिब ११,००० दर्शकहरूको समायोजन गर्न सक्षम छ। यो सामान्यतया ग्रेट सुमो टूर्नामेन्टको लागि स्थानको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर कुस्ती र बक्सि boxing खेलहरू कहिलेकाँहि आयोजना गरिन्छ।
ग्रेट सुमो टूर्नामेन्ट जनवरी, मार्च, सेप्टेम्बरमा कोकुगिकानमा आयोजना हुन्छ। कोकुगीकनमा सुमो रेसलिंगको बारेमा एउटा संग्रहालय छ। ऐतिहासिक सामग्री र सुमोको इतिहास परिचय गर्ने जस्ता यस संग्रहालयमा प्रदर्शित हुन्छन्। जब एक प्रतियोगिता आयोजित छैन, तपाईं नि: शुल्क प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, जब एक प्रतियोगिता आयोजित हुँदैछ, केवल प्रतियोगिताको दर्शकहरू प्रविष्ट गर्न सक्छन्।
कृपया ग्रान्ड सुमो कुश्ती हेर्नको लागि तलको लेख हेर्नुहोस्।
टोकियो ईडो संग्रहालय (रोगोकु)
इडो टोकियो संग्रहालय स्थायी प्रदर्शनीले टोकियोको विगतलाई (इडोको रूपमा चिनिन्छ) इडिओ पीरियडदेखि तुलनात्मक रूपमा हालका दशकहरूसम्म शटरस्टकमा राजधानीका सुविधाहरू समावेश गर्दछ।
ईडो-टोक्यो संग्रहालय जेआर रोगोकु स्टेशनको छेउमा एउटा विशाल संग्रहालय हो। यदि तपाईं यस सum्ग्रहालयमा जानुभयो भने तपाईं टोकियोमा 400०० वर्ष पहिलेदेखि अहिलेको दिनसम्म आनन्दित भई मानिसहरूको जीवनको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। हलमा गाह्रो साहित्य छैन। विभिन्न लघुचित्रहरू, पूर्ण आकारका पुलहरू र घरहरू लाइनमा लगाइएको हुन्छ ताकि आगन्तुकहरू यसबाट थाकेको बिना सिक्न सक्छन्। इडो-टोकियो संग्रहालय पनि विदेशी पर्यटकहरु बीच अत्यधिक मूल्यवान छ।
ईडो-टोकियो संग्रहालयको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
युवा जापानी केटी समूह टोक्यो मा अकिहाबरा स्टेशन बाहिर एक नियमित प्रदर्शन गर्दछ
अकिहाबरा टोकियोको पूर्वी भागमा अवस्थित एउटा सहर हो, त्यहाँ विशाल इलेक्ट्रिक शप शहर र जापानको उपसंस्कृतिको ठाउँका संयोजनहरू छन्।
अकिहाबारामा, दोस्रो विश्व युद्ध पछि, कालो बजार फैलिएको थियो जब आपूर्ति अभाव थियो। त्यस पछि, जापानी अर्थव्यवस्था ठीक भए पछि अकिहाबारामा धेरै बिजुली पसलहरू खोलिए र यो इलेक्ट्रिक शहरको रूपमा प्रख्यात भयो। इलेक्ट्रिक शपहरूको लागि किनमेल गर्न ओटाकु (उपसंस्कृति प्रेमीहरू) को लागी, एनिमेसन र खेल सम्बन्धित पसलहरूको संख्या बढ्यो र अन्ततः उपसंस्कृति प्रसारण पोइन्टको रूपमा मूल्यांकन प्राप्त गर्‍यो।
यदि तपाईं अकिहाब्रामा व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू र घरेलू उपकरणहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं JR अकिहाबरा स्टेशनको पूर्वपट्टि विशाल Yodobashi अकिबा "ठूलो इलेक्ट्रिक शप" मा जान सक्नुहुन्छ। यस स्टोरमा अधिक आईटमहरू छन् जम्मा floor 63,560 square वर्ग मिटर फ्लोर स्पेसको साथ।
जहाँसम्म, यदि तपाईं अकिहाबाराको बिजुली जिल्ला वा दासी क्याफेमा जान चाहानुहुन्छ भने, तपाईं अझ अकिहाबारा स्टेशनको पश्चिम तर्फ हिड्न चाहानुहुन्छ। यसमा धेरै पसलहरू छन्। कहिलेकाँही पसलहरूको अगाडि cosplayers छन्।
अकिहाबाराका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
टोकियोको निहोनबाशी सेक्सनमा मित्सुकोशी डिपार्टमेन्ट स्टोर: मित्सुकोशी, लिमिटेड टोक्यो, जापानको मुख्यालय भएको अन्तर्राष्ट्रिय डिपार्टमेन्ट स्टोर चेन हो = शटरस्टक
टोकियोमा रहेको टोकुगावा शोगुनेटले करिब 400०० वर्ष अघि स्थापना भएकोले निहोनबाशी वाणिज्यिक क्षेत्रको रूपमा विकसित भयो। "Nihonbashi" Nihonbashi नदी मा विश्राम एक पुल हो। टोकुगावा शोगुनेटको युगमा, यो पुल शुरुवात बिन्दु थियो र क्योटोको सडक कायम राखिएको थियो। यो पुल प्राय जसो जापानी पुरानो चित्रहरु (उकिओ-ई) मा चित्रण गरिएको छ। Nihonbashi धेरै पटक आगोले नष्ट भयो। हालको पुल १ 1911 ११ मा निर्माण गरिएको ढु stone्गे पुल हो जुन जापानको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पत्तीको रूपमा तोकिएको छ।
Nihonbashi हालका दशकहरुमा Shinjuku र Shibuya द्वारा ग्राहकहरु बाट वञ्चित हुन को प्रवृत्ति थियो, तर अब पुनर्विकास प्रगति र यो बढिरहेको छ।
Nihonbashi को बीच मा डिपार्टमेन्ट स्टोर "Mitsukoshi" माथिको फोटो मा देखिएको छ। मित्सुकोशीले १ 17 औं शताब्दीमा किमोनो डीलरको रूपमा शुरू गरे र २० औं शताब्दीको शुरुदेखि नै जापानको डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रतिनिधिको रूपमा बढेको छ। धनी मानिसहरूका लक्जरी कारहरू मित्सुकोशीको प्रवेशद्वारमा लाइनमा उभिएका छन्। मित्सुकोशीमा धेरै उच्च-अन्तका सामानहरू छन्, धनी मानिसहरू किनमेल गर्न आउँदछन्।
मित्सुकोशीले गिन्जामा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोले, तर मलाई लाग्छ कि निहोनबाशीको मित्सुकोशी धेरै ठूलो छ र सामाजिक स्थिति उच्च छ।
भर्खर, शिन्जुकु डिपार्टमेन्ट स्टोर "Isetan" युवा मानिसहरू माझ बढी लोकप्रिय छ। जे होस्, यदि तपाईं भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ र एक जापानी जापानी परम्परागत डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्छु कि तपाईं मित्सुकोशी जानुहोस्।
>> मित्सुकोशीको आधिकारिक साइट यहाँ छ
इम्पीरियल दरबार एक महल हो जहाँ जापानी सम्राट बस्छन्। यो "इडो महल" थियो जुन एक पटक टोकुगावा शोगुनेटको आधार हो। १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा तोकुगावा शोगुनेट पतन भयो र नयाँ सरकारले यस महललाई इम्पीरियल दरबारको रूपमा प्रयोग गर्न शुरू गर्यो। यो भन्न सकिन्छ कि इम्पीरियल दरबार जापान मा एक मात्र सक्रिय महल हो।
यदि तपाईं इम्पीरियल प्यालेसको पृष्ठभूमि बिरूद्ध तस्विर लिन चाहानुहुन्छ, कृपया JR टोकियो स्टेशन वा निजुबाशी-मे सबवे स्टेशन, ओटेमाची सबवे स्टेशनमा जानुहोस्। To देखि १० मिनेट पैदल यात्रा पछि, तपाईले सुन्दर इम्पीरियल प्यालेसलाई माथि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन बाहिरीबाट देखिन्छ।
जनता इम्पेरियल प्यालेसमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। जे होस्, यदि तपाईं सन्दर्भमा अग्रिम बुक गर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट, तपाई साप्ताहिक दिनहरू प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
केही दिनहरू जस्तै जनवरी २ र सम्राटको जन्मदिनको लागि, सामान्य व्यक्तिहरू कुनै पनि आरक्षण बिना इम्पीरियल प्यालेसमा प्रवेश गर्न सक्दछन्। यस समयमा, धेरै संख्यामा व्यक्तिले लामो प r्क्तिहरू बनाउँछन्। तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि इम्पीरियल प्यालेसमा भवन भित्रबाट सम्राट परिवारले हातहरू लहराउँदै थिए।
अर्कोतर्फ, इम्पीरियल दरबारको पूर्वपट्टि हरियो क्षेत्रका लागि तपाईले अग्रिम आरक्षण गर्नु पर्दैन (सोमबार र शुक्रवार बाहेक)। तपाईंले प्रविष्ट गर्न सक्नुहुने समय क्षेत्र मौसममा फरक पर्न सक्छ। जाडोमा, तपाईं पार्कमा १ enter::15० पछि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। कृपया सावधान रहनुहोस्।
टोकियो स्टेशन, Chiyoda को टोकियो, जापानको Marunouchi व्यवसाय जिल्ला मा एक रेलवे स्टेशन = शटरस्टक
मारुनुची जेआर टोक्यो स्टेशन र इम्पीरियल दरबार बीच स्यान्डविचेड क्षेत्र हो। त्यहाँ जापानमा सब भन्दा ठूलो व्यवसाय क्षेत्र फैलदैछ।
यस क्षेत्रमा साम्राईका ठूला घरहरू विगतमा फैलिएका थिए। टोकुगावा शोगुनेटको पतन पछि, यो क्षेत्र उजाड भएको थियो, तर मित्सुबिशी समूहले पुनर्निर्माणको लागि एक व्यवसाय जिल्ला सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो। हाल, मरुनुची क्षेत्रमा, गगनचुम्बी भवनहरू सँगसँगै उभिन्छन्। यी भवनहरूमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहेका छन् जसले हामीलाई जापानी अर्थव्यवस्थाको शक्ति महसुस गराउँदछन्।
म पहिले यस क्षेत्रमा गगनचुम्बी भवनमा काम गर्थें। यस क्षेत्रको अग्लो फ्लोरबाट दृश्य धेरै नै राम्रो छ। इम्पीरियल दरबारको विशाल जंगल तपाईंको अगाडि फैलदैछ, र तपाईं शिन्जुकुको अग्लो अग्लो भवन सडकहरू देख्न सक्नुहुनेछ। थप, माउंट बिहान र बेलुका फुजी ठुलो देखिन्छन्। साँझमा, माउन्ट। फुजी सूर्यास्तको साथ चम्किन्छ।
पहिले यो कार्यालय शहरमा, सप्ताहन्तमा थोरै मानिसहरू थिए। यद्यपि, हालसालै, जेआर टोक्यो स्टेशनको अगाडि, मारुनुची बिल्डिंग र शिन मारुनुची बिल्डिंग, जुन रेस्टुरेन्ट जिल्लाहरू र किनमेल जिल्लाहरूले भरिएको छ, निर्माण गरिएको छ, जुन पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। मारुनुची बिल्डिंगको माथिल्लो तलामा रहेको रेस्टुरेन्टबाट तपाईले माथि उल्लिखित अद्भुत दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
माथिको फोटोमा देखिएझैं ईआर हाउस स्टेशन जेआर टोकियो स्टेशनमा पुनःस्थापित गरियो। यी भवनहरू राती उज्यालो छ र यो साँच्चै सुन्दर छ। कृपया यो सुन्दर Marunouchi क्षेत्र को वरिपरि हिंड्ने प्रयास गर्नुहोस्!
>> फोटोहरू: मारुनुची -टोकियो स्टेशनको वरपर फैशनेबल व्यवसाय जिल्ला
Wako डिपार्टमेन्ट स्टोर मा Ginza जिल्ला। फैशन ब्रांड र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु को लागी, Ginza जिल्ला, टोक्यो मा एक स्थान खोल्दै
पूर्वी टोकियोमा गिन्जा सबैभन्दा ठूलो किनमेल शहर हो।
Ginza एक उच्च को किनमेल को जिल्ला को रूप मा प्रसिद्ध छ। टोकियो मा एक ठूलो किनमेल शहर को रूप मा, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, आदि पश्चिमी टोक्यो मा पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। शिन्जुकु र शिबुया सब भन्दा लोकप्रिय ट्राफिक हुन सक्छ, तर गिन्जासँग सबैभन्दा लक्जरी ब्रान्ड स्टोरहरू छन्।
Ginza स्टेशन, तपाईं टोकियो स्टेशन बाट Marunouchi सबवे लाइन बाट लगभग2मिनेट हुनुहुन्छ। जब तपाईं गिन्जा स्टेशनमा पुग्नुहुन्छ, तपाईं पहिले Ginza--chome चौराहेमा टिकट गेटबाट केहि मिनेटमा जानुहुन्छ। त्यहाँ "वाको" (माथिको तस्वीरमा देखिएको भवन) एउटा विशेष पसलको रूपमा प्रख्यात छ लक्जरी वाच र गहना जस्ता। त्यहाँ सडकको अर्को छेउमा Ginza Mitsukoshi डिपार्टमेन्ट स्टोर छ। यो चौराहे गिन्जाको केन्द्र हो।
वाकोको वरपर यति धेरै ब्रान्ड पसलहरू, रेष्टुरेन्टहरू र क्याफेहरू छन्।
गिन्जामा किनमेल गर्नका लागि कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
काबुकिजा थिएटर (हिगाशी-गिन्जा)
जापानको टोकियोको गिन्जा जिल्लाको काबुकिजा थिएटर, यो परम्परागत काबुकी नाटक फर्म = शटरस्टकका लागि टोकियोमा प्रमुख थिएटर हो।
Ginza 5-chome चौराहेबाट लगभग minutes मिनेट पैदल, त्यहाँ "काबुकिजा" छ जुन जापानमा काबुकीका लागि सबैभन्दा ठूलो समर्पित थिएटर हो। Kabukiza मा, प्रमुख Kabuki कलाकारहरु संग प्रदर्शन आयोजित भइरहेको छ। त्यहाँ लगभग हरेक दिन, दिन (सामान्यतया ११: ०-4-१-11: ००) र रात (सामान्यतया १ 00: -15०-२०: )०) प्रदर्शन हुन्छन्। काबुकिजा टिकट बुक गर्न, अपरेटिंग कम्पनी शोचीकूको निम्न आधिकारिक वेबसाइट उपयोगी छ। तपाईं पनि दिन Kukukiza मा टिकट किन्न सक्नुहुन्छ।
>> काबुकिजाका विवरणहरूका लागि कृपया यस वेबसाइट हेर्नुहोस्
काबुकीको बारेमा मैले निम्न लेखमा परिचय दिएँ। कृपया ध्यान दिनुहोस् यदि आपत्ति छैन भने।
टोकियो टावर ट्वायलाइट समयमा = शटरस्टक
टोकियो टावर १ 333 1958 मा खोलिएको 634 metersXNUMX मिटरको उचाई संग प्रसारण टावर हो। यो टोकियो स्काइट्री (उचाइ XNUMX XNUMX मीटर) पछाडि जापानको दोस्रो उच्च भवन हो। टोकियो टावर शिबकोइन, मिनाटो-कु, टोक्योको केन्द्रमा अवस्थित छ।
टोकियो टावर एक अर्थमा जापानीहरूका लागि विशेष हुन सक्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, जापानीहरूले भग्नावशेषहरूबाट नयाँ शहर निर्माण गर्न शुरू गरे। नयाँ टोकियोको प्रतीक टोकियो टावर थियो। जापानीहरूले यस सम्झनाहरु साझा, हामी टोक्यो Skytree २०१२ मा पूरा भए पछि पनि टोकियो टावर को मूल्य छ।
सत्य भन्नुपर्दा, टोकियो टावरसँग सुरुमा फेसनल भवनको रूपमा त्यति तस्बिर थिएन। पेरिसको एफिल टावर फेसनल चलचित्रहरूमा देखा पर्दछ, तर टोकियो टावर गोडजिलाले गोडजिला फिल्महरूमा भाँच्यो। जे होस्, भर्खरको टोकियो टावर फेसनल युवाहरूमा लोकप्रिय छ। यसको पछाडिको एक कारण तथ्य यो छ कि एक अद्भुत रोशनी डिजाइन विश्वको अग्रणी प्रकाश डिजाइनर मोटोको आइएसआईआईआई द्वारा बनाइएको थियो। हाल, टोकियो टावरको रोशनी ज्यादै सुन्दर छ। कृपया टोकियोमा टोकियो टावरको सुन्दर रट दृश्यको हरेक रूपमा आनन्द लिनुहोस्।
टोकियो टावरसँग शीर्ष डेक (२ 250० मिटर अग्लो) र मुख्य डेक (१ 150० मिटर अग्लो) छ। यी वेधशालाहरू दैनिक 9: ० to देखि २:00:०० सम्म खुल्ला हुन्छन्। टावरको मुनि, त्यहाँ एक्वैरियमहरू, क्याफेहरू, रेस्टुरेन्टहरू र पसलहरू छन्।
टोकियो टावरमा हेर्ने ठाउँको रूपमा, म रोपपोगी हिल्सको वेधशालालाई पछि वर्णन गर्न सिफारिस गर्दछु। किनकि रोपपोंगी हिल्स टोक्यो टावरको नजिकै छ, तपाईं टोकियो टावरको शक्तिशाली रोशनीको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
>> टोकियो टावरको आधिकारिक साइट यहाँ छ
टोक्यो जोडी प्रेमी शहर दृश्यका साथ टोक्यो टावर दृश्यहरू रोपपोगी पहाडी टावरको छाना माथिबाट, टोक्यो = शटरस्टक
पर्यटकहरू रोप्पोगी हिल्स मोरी टावरमा सूर्यास्तको आनन्द लिन्छन्। यो रोपपन्गी हिल्स शहरी विकासको केन्द्रबिन्दु हो, हाल टोकियो = शटरस्टकमा पाँचौं-अग्लो भवन हो।
मिनाटो डिस्ट्रिक्ट, रोपपन्गी, टोकियोमा राष्ट्रिय कला संग्रहालयको आधुनिक डिजाइनको आन्तरिक। बीचमा रेस्टुरेन्ट एनिमेटेड फिल्म "तपाईंको नाम" = शटरस्टकमा देखा पर्‍यो
रोपपोगी टोकियोको बीचमा फेसनयोग्य शहर हो। किनकि त्यहाँ रोपपोगी वरपर धेरै दूतावासहरू छन्, त्यहाँ धेरै विदेशीहरू छन्, र त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण छ। यस शहरमा, सेलिब्रेटीहरू, कपडाका अधिकारीहरू, मास मीडियाका अधिकारीहरू र अन्यहरू भेला हुन्छन्। त्यहाँ धेरै आईटी स्टाफहरू पनि छन्। शिन्जुकु र शिबुयाको तुलनामा रोपपोगी एउटा सानो शहर हो, तर मलाई लाग्छ कि रोपपोन्गी एक अधिक परिष्कृत शहर हो।
रोपपोन्गी कलाको शहर पनि हो। त्यहाँ "नेशनल आर्ट सेन्टर" छन् जहाँ ठूलो मात्रामा प्रदर्शनहरू सँधै आयोजित हुन्छन्, "मोरी आर्ट संग्रहालय" उन्नत समकालीन कलाको परिचय दिँदै।
र यस शहरमा, "टोकियो मिडटाउन" जहाँ रिट्ज-कार्लटन टोक्यो आदि स्थित छ, "रोपपोगी हिल्स" जहाँ ग्रान्ड हयात टोकियो र टिभी असाही, मोरी आर्ट संग्रहालय आदि फैलिएको छ।
रोपपोंगी हिल्सको मुख्य भवन २ a238 मिटरको उचाईमा छ। यस भवनको दृश्य फ्लोरबाट तपाईं टोकियो स्काइट्री, टोकियो टावर, टोकियो खाडी र यस्तै अरू देख्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा, म सामान्यतया यस साइट को लेखहरु यस भवनको अग्लो भुईँमा लेख्छु। मेरो सीटबाट, टोकियो टावरको रात दृश्य धेरै सुन्दर देखिन्छ।
यदि तपाई रोपपोगी भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, म रोपपोगी हिल्सबाट टोकियो मिडटाउन जान सिफारिस गर्दछु। यदि तपाईंलाई कला मनपर्दछ भने, तपाईं तपाईंको यात्रा कार्यक्रममा राष्ट्रीय कला केन्द्र थप्न सक्नुहुन्छ। नेश्नल आर्ट सेन्टरको रेस्टुरेन्ट एक फेसनल दर्शनीय स्थल हो जुन फिल्म 'तपाईंको नाम' मा देखा पर्‍यो। माथिको चित्र मा देखिए अनुसार।
>> फोटोहरू: रोकिongपोन्सी हिल्स मोरी टावर टोकियो
अकासाकासँग धेरै ठूला होटेल र रेष्टुरेन्टहरू, अकासाका, टोकियो = शटरस्टक छन्
अकासाका टोकियोको मध्य भागमा अवस्थित छ र टोकियोको कुनै पनि ठाउँमा जानका लागि एक धेरै सुविधाजनक ठाउँ हो। टोकियो मेट्रो मरुनुची लाइन र गिन्जा लाइनमा अकासाका मित्सुके स्टेशन छ, जसले टोकियोको प्रमुख क्षेत्रहरू जोड्दछ, र टोकियो मेट्रो चियोदा लाइनमा आकसका स्टेशन।
अकासाकामा धेरै होटेल र रेस्टुरेन्टहरू छन्। रातमा, आसपासका सरकारी कार्यालयहरू र व्यवसायिक जिल्लाबाट धेरै व्यक्तिहरू जीवन्त बनाउन आउँदछन्।
राज्य अतिथि गृह (अकासाका दरबार)
टोकियोमा राज्य गेस्ट हाउस (अकासाका दरबार) = शटरस्टक
अकासाकामा त्यहाँ राज्य अतिथि गृह (अकासाका प्यालेस) छ, जसले विदेशी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूको मेजबानी गर्दछ। यो सामान्यतया जनताको लागि खुला हुन्छ। राज्य स्टेट हाउसका धेरै राम्रा फोटोहरूको साथ तल पृष्ठ छ।
＞＞ फोटोहरू: टोकियोको राज्य अतिथि गृह (आकसका प्यालेस)
टोकियो खाडी, इन्द्रेणी पुल र टोकियो टावर ल्याण्डमार्क ट्वायलाइट दृश्य, ओडाइबा, टोक्यो = शटरस्टकको रात्रि दृश्य
डुन्ड शहर, ओडाइबा = शटरस्टक_ and Destro1१1 Un0 मा युनिकोर्न मोड र डिस्ट्रो मोड दुबैमा गुन्डम आरएक्स ० ० को नवीनतम १ देखि १ जीवन आकार मोडलको परिचय।
Yurikamome ट्रेन फुजी टेलिभिजन भवन, Odaiba, जापान = शटरस्टक हुँदैछ
Odaiba टोक्यो खाडी मा स्थित एक विशाल ल्यान्डफिल हो। यो ल्यान्डफिल टोकियोको रक्षाको लागि किल्ला बनाउनको लागि निर्माण गरिएको थियो जब १ et औं शताब्दीको मध्यमा अमेरिकी सेनाको बेडे जापान आए। जे होस्, अब यो धेरै नै विस्तार भएको छ र यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ आकर्षणहरू टोकियोका प्रतिनिधिहरू लाइन अप गर्दछन्।
माथिको तस्वीरमा देखिएकै "रेनबो ब्रिज" द्वारा ओडाइबा टोकियो शिबौरा जिल्लासँग जोडिएको छ। धेरै पर्यटकहरूले शिन्बाशी स्टेशनबाट "Yurikamome" भनिने एक स्वचालित गाईडवे ट्रान्जिट सेवा प्रयोग गर्छन्, र इन्द्रेणी पुल हुँदै ओडाइबा जान्छन्। त्यहाँ धेरै पर्यटन स्थलहरू छन्।
>> फोटोहरू: टोकियो खाडीमा Odaiba
Odaiba एक थीम पार्क जस्तै हो। यस "थिम पार्क" मा, उदाहरण को लागी, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलहरु छन्।
चार ठूला शपिंग मल्ल
Dex टोक्यो बीच
"डेक्स टोकियो बीच" एक मोटिफको रूपमा जहाज सहित एक विशाल शपिंग सेन्टर हो, करीव shops ० वटा पसल, रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जन सुविधाहरू छन्। यस शपिंग मल्लको डेकबाट तपाई इन्द्रेणी ब्रिज र टोकियो टावर राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिसमस अवधिमा धेरै रोशनीहरू पनि चम्किन्छन् र रातको दृश्य भव्य हुन्छ। डेक्स टोक्यो बीच २ मिनेट पैदल यूरिकामोमेको Odaiba Kaihinkoen स्टेशन बाट छ।
"एक्वा सिटी ओडाइबा" एक ठूलो शपिंग मल्ल हो जसमा करीव shops० वटा पसल छन्। मलको नजिकै स्ट्याचु अफ लिबर्टीको प्रतिकृति छ (पेरिस वा न्यू योर्क जस्तो देवी)। तपाई टोकियो शहरको केन्द्र देख्न सक्नुहुनेछ स्ट्याच्यू अफ लिबर्टी र इन्द्रेणी ब्रिज भन्दा अगाडि। अक्वा शहर ओडाइबा यूरिकैमोमेको डायबा स्टेशनको अगाडि छ।
"भेनस फोर्ट" एक फेसनल इनडोर प्रकारको शपिंग मल्ल हो जसले १ Europe औं - १ 17 औं शताब्दीमा युरोपको सडकहरू पुन: उत्पादन गर्दछ। यहाँ करिब १ 18 ० वटा पसल र रेष्टुरेन्टहरू छन्। त्यहाँ आउटलेट मल पनि छ।
यो शपिंग मल युवा महिलाहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। भेनस फोर्ट यूरिकैमोमेको अओमी स्टेशनको अगाडि छ।
गोताखोर शहर टोपियो प्लाजा
गोताखोर शहर टोपियो प्लाजा नाटकीय अन्तरिक्ष को अवधारणा संग एक ठूलो जटिल छ। यहाँ क्याजुअल ब्रान्ड पसल र रेष्टुरेन्टहरू, फूड कोर्ट, प्रत्यक्ष घरहरू र यस्तै अन्य चीजहरू छन्। माथिको तस्वीरमा देखिएको विशाल गुंडम डायभर शहर टोपियो प्लाजाको अगाडि उभिरहेको छ। गोताखोर शहर टोपियो प्लाजा Yurikamome Daiba स्टेशन बाटaमिनेट पैदल छ।
Odaiba, टोक्यो, जापान = शटरस्टकमा विशाल फेरिस व्हिलको रात दृश्य
प्यालेट टाउन फेरिस व्हील
यो यूरिकैमेमेसको अओमी स्टेशनको अगाडि फेरिस व्हिल हो। फेरिस व्हिल लिनुहोस् र तपाईं टोकियो खाडी र टोकियो मध्य शहर राम्रोसँग देख्न सक्नुहुनेछ। किनकि यो साताको दिन २२ बजे र सप्ताहन्तमा २ o'clock बजे सम्म खुला रहन्छ, यो मानिसहरूलाई सुन्दर सिफारिश पनि हेर्न को लागी सिफारिस गरिन्छ।
टोकियो जयोपोलिस जापानको सब भन्दा ठूलो घरेलु इनडोर प्रकारका मनोरन्जन पार्कहरू मध्ये एक हो, २० भन्दा बढी किसिमका आकर्षणहरू जस्तै रोटरी रोलर कोस्टरहरू र मोसन राइडहरू। यो मनोरञ्जन पार्क माथिको डक्स टोक्यो बीचमा अवस्थित छ।
मॅडम तुसाद टोकियो
यस मनोरञ्जन पार्कमा हलिउड स्टार र एथलीटहरू जस्ता विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको जीवन आकारका धेरै संख्याहरू छन्। यो सुविधा डेक्स टोक्यो बीचमा पनि अवस्थित छ।
लेगोल्याण्ड डिस्कवरी सेन्टर टोकियो
यो एक इनडोर प्रकार मनोरञ्जन पार्क हो जुन million मिलियन भन्दा बढी LEGO ब्लकहरू मिलेर बनेको छ। यो सुविधा डेक्स टोक्यो बीचमा पनि अवस्थित छ।
Daiba १-chome शपिंग जिल्ला
Daiba १ - chome शपिंग क्षेत्र डेक्स टोक्यो बीचको चौथो फ्लोरमा एक इनडोर प्रकार मनोरन्जन पार्क हो। यहाँ जापानको रेट्रो शपिंग सडकहरू पुन: उत्पादन गरिन्छ। यो विदेशी पर्यटकहरूका लागि अप्रत्याशित रूपमा लोकप्रिय ठाउँ हो।
यो कार थिम पार्क हो जुन टोयोटा द्वारा संचालित फेरिस ह्विल नजिकै रहेको छ। यदि तपाईं यस सुविधामा जानुभयो भने, तपाईं टोयोटाको नयाँ मोडलहरू र विश्वको ऐतिहासिक कारहरू देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ २०० मिटर लामो कोर्स पनि छ जुन आगन्तुकहरूले इलेक्ट्रिक कार्टहरू चलाउन सक्दछन्।
यो ओन्सेन (तातो वसन्त) थिम पार्क हो जुन पुरातन टोकियोको विषयवस्तु हो। यस सुविधामा धेरै घरका स्नानगृह र ठूला सार्वजनिक स्नानगृहहरू छन् जुन तल्लाको १ 1400०० मिटरबाट पम्प गरिएको तातो स्प्रि .हरू प्रयोग गर्दछ। त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरू र इजाकाया (जापानी शैली पब) पनि छन्। ओडो ओन्सेन मोनोग्याटारी २ मिनेटको पैदल यात्रा यूरिकैम्मे टेलीकॉम सेन्टर स्टेशन बाट छ।
Odaiba Kaihin कोएन (Odaiba समुद्री किनार पार्क)
ओडाइबा कैहिं कोएन (ओडाइबा समुद्री तट पार्क) एक बलुआ समुद्रतट हो जुन ur मिनेट उडिबा कैहिन कोएन स्टेशनबाट यूरिकामामेमा छ। दुर्भाग्यवश तपाईं यस समुद्री किनारमा पौडन सक्नुहुन्न। तर यहाँबाट तपाई इन्द्रेणी पुल आदि देख्न सक्नुहुन्छ। यो समुद्री किनार हिँड्न सिफारिस गरिएको छ।
फुजी टिभी मुख्यालय
माथिको तेस्रो चित्रमा देखिने अनुपम भवन फुजी टिभी मुख्यालय हो। यस भवनको माथिल्लो भागको क्षेत्र अवलोकन कोठा हो। सामान्य रूपमा व्यक्तिहरू यहाँ पनि प्रविष्ट गर्न सक्दछन्। यस भवनमा फुजी टिभी मौलिक सामान पसलहरू इत्यादि छन्। यदि तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने, तपाईं यस भवनमा जापानी शीर्ष ताराहरू भेट्न सक्षम हुनुहुनेछ!
"Ikebukuro" स्टेशन पूर्व दृश्यावलोकन। स्टेशन भवन = शटरस्टकमा "Seibu डिपार्टमेन्ट स्टोर" छ
इकेबुकुरो टोकियोको पश्चिमी भागमा विशाल शपिंग शहर हो।
टोकियोको पश्चिममा, उत्तरबाट क्रमबद्ध रूपमा तीन विशाल शपिंग शहरहरू छन्: इकेबुकुरो, शिन्जुकु र शिबुया। यिनीहरू मध्ये सब भन्दा ठूलो सिन्जुकु हो। र युवाहरु धेरै जम्मा गर्छन् शिबुया। यसको विपरित, Ikebukuro निम्न दुई सुविधाहरू छन्।
तपाई स्टेशनको अगाडि कुशलताले किन्न सक्नुहुन्छ
पहिले, Ikebukuro मा, विशाल डिपार्टमेन्ट स्टोर र शपिंग मल्लहरू Ikebukuro स्टेशन अगाडि केन्द्रित छन्, ताकि तपाईं कुशलतासाथ किन्न सक्नुहुन्छ।
Ikebukuro स्टेशन को पूर्व निकास मा Seibu डिपार्टमेन्ट स्टोर, Ikebukuro पार्को (शपिंग मल्ल), Bic क्यामेरा मुख्य स्टोर (गृह उपकरण स्पेशलिटी स्टोर), Yamada Denki (गृह उपकरण स्पेशलिटी स्टोर) छन्।
Ikebukuro को पश्चिम प्रवेशद्वार मा, त्यहाँ Tobu डिपार्टमेन्ट स्टोर र Lumine (शपिंग मल्ल) छन्।
Seibu डिपार्टमेन्ट स्टोर (बिक्री फ्लोर स्पेस, १, 91,555 वर्ग मिटर) र टोबु डिपार्टमेन्ट स्टोर (,२, square 82,963 square square वर्ग मीटर) जापानको शीर्ष वर्ग डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू हुन्। त्यसो भए तपाई Ikebukuro मा किनमेल गरी सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। थप रूपमा, आइकेबुकुरोको घर इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरू अकिहाबरा र शिन्जुकुसँग तुलना गर्न सकिन्छ, त्यसैले तपाईं राम्रो शपिंग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
तपाईं सनशाइन शहरमा धेरै खेल्न सक्नुहुन्छ
Ikebukuro मा "सनशाइन "०" का दृश्य। एक 60-कहानी गगनचुम्बी इमारत Ikebukuro को प्रतीक हो। राजमार्ग चाँडै चलिरहेको छ = शटरस्टक
इकेबुकुरोको दोस्रो विशेषता यो हो कि त्यहाँ अनौंठो वाणिज्यिक र पर्यटन क्षेत्र "सनशाइन सिटी" छ र इकेबुकुरो स्टेशनबाट १० मिनेटको दूरीमा छ।
सनशाइन सिटी गगनचुम्बी "सनशाइन "०" (उचाई २60 .239.7। M मीटर, stories० कथाहरू) मा केन्द्रित एक व्यावसायिक सुविधा हो। सनशाइन to० को थप बाहेक, त्यहाँ "वर्ल्ड इम्पोर्ट मार्ट", "सनशाइन प्रिन्स होटेल", र अन्य नामका व्यवसायिक र पर्यटन सुविधाहरू छन्।
सनशाइन ० को कर्पोरेट अफिसहरू इत्यादि छन्। शीर्ष तल्ला वेधशाला (SKY CIRCUS) मा, तपाई VR (भर्चुअल रियलिटी) टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर आकर्षणको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
र वर्ल्ड इम्पोर्ट मार्टसँग एक्वेरियम र एक तारामंडल छ। त्यहाँ एक इनडोर प्रकार मनोरन्जन पार्क "नानजाटाउन।" नाम्जाटाउनमा, तपाईं विभिन्न आकर्षणको मजा लिन सक्नुहुन्छ, र तपाईं धेरै Gyoza (पातलो आटामा जमिनको मासु र तरकारीले बेर्ने खाद्य पदार्थ) र डेसर्टहरू खान सक्नुहुन्छ।
साथै सनशाइन शहर वरपर, निम्न अनौठो व्यावसायिक सुविधाहरू बढ्दैछ।
टोक्यो हात Ikebukuro : धेरै अनौंठो ठूलो DIY पसल
Ikeybukuro मुख्य स्टोर सजीव : एनिमेसन सम्बन्धित पुस्तक र सामानको विशेषता स्टोर
ओटोमे रोड : सडकहरू जहाँ महिला एनिमेटेड सामान स्टोरहरू माथि लाइन
>> सनशाइन शहर को आधिकारिक साइट यहाँ छ
Shinjuku Gyoen park 58.3..3.5 हेक्टर को आकार संग एक पार्क हो, around. km किमी को आसपास, Shinjuku को लागी अवस्थित छ जुन टोकियो मा सबैभन्दा ठूलो शपिंग शहर हो। यो Marunouchi सबवे लाइन मा Shinjuku Gyoen स्टेशन बाट को बारे मा5मिनेट को दूरी मा छ। मेरो विचारमा शिन्जुकु ग्योएन टोकियोका पार्कहरूमा सब भन्दा सुन्दर छ।
टोकुगावा शोगुनेटको युगमा, यो डेम्यो (प्रान्तका स्वामी) को हवेली थियो। त्यस पछि, यो शाही बगैंचा भयो, र यसलाई २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पार्कको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
किनकि यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहितको त्यस्तो स्थान हो, शिन्जुकु ग्योएनले पुरानो जापानी शैली, ब्रिटिश शैली, फ्रेन्च शैलीको पूर्ण विकसित बगैंचा विकसित गरेको छ। धेरै पर्यटकहरू यस पार्कमा प्रवेश गर्छन् र उनीहरूको सुन्दरताबाट आश्चर्यचकित हुन्छन्।
Shinjuku Gyoen मा वर्ष मा धेरै प्रकारका फूलहरू खिलछन्। लगभग ११०० चेरी फूलहरू वसन्त omतुमा खिलछन्। र शरद पातहरू अद्भुत छन्। जाडो मौसममा पनि ड्याफोडिल, फुकुन्जो, उमे, कान्जाकुरा, कन्जाकी जस्ता फूलहरूले तपाईंलाई स्वागत गर्दैछन्।
Shinjuku Gyoen मा एक रेस्टुरेन्ट र एक क्याफे छन्। यस पार्कको उद्घाटन समय:: ०-9-१-00: ०० (१ 16: at० मा बन्द) हो। प्रत्येक सोमबार बन्द छ (यदि सोमवार सार्वजनिक छुट्टी हो भने निम्न हप्ताको दिन बन्द छ)। प्रवेश शुल्क सामान्य रूपमा २०० येन छ, प्राथमिक र जूनियर हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू y० येन, शिशुहरू स्वतन्त्र छन्।
>> Shinjuku Gyoen को विवरणको लागि, कृपया यो साइट हेर्नुहोस्
Shinjuku Gyoen राष्ट्रीय उद्यान मा चेरी फूल को लागी, कृपया तलको लेख मा हेर्नुहोस्।
शिन्जुकु र माउन्टमा उच्च-वृद्धि भवनहरू। फुजी, टोक्यो, जापान = शटरस्टक
शिन्जुकु टोकियोमा सबैभन्दा ठूलो किनमेल शहर हो। उही समयमा, यो टोकियोको अग्रणी कार्यालय सडक मध्ये एक हो।
Shinjuku स्टेशन जापानको सबैभन्दा ठूलो स्टेशन हो। ट्रेन यमनोट लाईन, Chuo लाइन, Sobu लाइन, Saikyo लाइन, आदि जस्तै जेआर Shinjuku स्टेशन मा बोर्ड मा छ। थप रूपमा, निजी रेल जस्तै ओडाक्यू लाइन (हाकोन वा एनोशिमा दिशा), केइओ लाइन (टाकाओ र हचियोजी दिशा), सेइबु शिन्जुकु लाइन (टोकोरोजावा र चिचिबु दिशा) आदि बोर्डमा छन्। सबवे जस्तै मारुनौची लाइन, तोई शिन्जुकु लाइन, तोएइ ओदो लाइन, आदि पनि सिन्जुकुमा प्रवेश गर्दछ।
Shinjuku निम्न तीन जिल्लाहरु मा विभाजित छ।
पहिले, JR Shinjuku स्टेशन पूर्व निकास पक्ष Shinjuku सबैभन्दा ठूलो किनमेल क्षेत्र हो। यहाँ इसेटान डिपार्टमेन्ट स्टोर छ, जुन जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय डिपार्टमेन्ट स्टोर हो, धेरै इलेक्ट्रोनिक्स विशेष पसल, कपडा स्टोर र यस्तै। त्यस पछाडि जापानको सब भन्दा ठूलो मनोरञ्जन जिल्ला काबुकिचो छ। र थप रूपमा त्यहाँ गोल्डन Gai, एक रेट्रो शैली पट्टी सडक। यदि तपाई सिन्जुकुमा अधिकतम रकम किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाई यो पूर्वी क्षेत्रमा जानुहोस्।
दोस्रो, त्यहाँ JR Shinjuku स्टेशन पश्चिम निकास तर्फ छ। यहाँ Odakyu डिपार्टमेन्ट स्टोर र Keio डिपार्टमेन्ट स्टोर छन्। र त्यहाँ धेरै स्टोरहरू छन् Yodobashi क्यामेरा, जापान मा एक प्रमुख ठूला इलेक्ट्रोनिक्स विशेषता स्टोर। त्यस पछाडिको टोकियो मेट्रोपोलिटन गवर्नमेंट अफिस, केइओ प्लाजा होटेल, हयात रिजेन्सी टोकियो, हिल्टन टोकियो र अन्य लगायत उच्च उँचाइ सडकहरू छन्। यो उच्च बृद्धि भवन सडक धेरै चलचित्रहरूको चरण पनि हो (उदाहरणका लागि, "तपाईंको नाम।") र नाटक। यस क्षेत्रमा पूर्वी पक्षको क्षेत्र भन्दा थोरै फेसनशील वातावरण छ।
तेस्रो, JR Shinjuku स्टेशन को दक्षिण निकास तर्फ, Takashimaya डिपार्टमेन्ट स्टोर र Tokyu हात को रूप मा ठूला शपिंग सुविधा सँगै व्यवस्था छ। यो क्षेत्र सब भन्दा पछि विकसित भएको थियो, त्यसैले यो सबै भन्दा फैशनेबल छ र रोशन भव्य छ।
Isetan एक विशाल डिपार्टमेन्ट स्टोर हो जुन JR Shinjuku स्टेशन को पूर्व निकास देखि minutes मिनेट को दूरी मा र Marunouchi सबवे लाइन मा Shinjuku Sanchome सबवे स्टेशन बाट एक मिनेट को पैदल मा एक पैदल दूरी मा स्थित छ।
यो डिपार्टमेन्ट स्टोर अब जापानमा सबैभन्दा लोकप्रिय छ। उत्पादको डिजाईन र गुणवत्ता जस्तै Isetan मा कपडा वस्तुहरू धेरै राम्रो छन्। थप रूपमा, Isetan को भूमिगत फ्लोरमा अद्भुत मिठाई र व्यंजनहरू छन्। मलाई लाग्छ कि वस्तुको मूल्य अन्य डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू भन्दा अलि बढी छ।
त्यहाँ एक एनेक्स छ जहाँ पुरुषको कपडा र कपडाका सामानहरू मात्र बिक्री गरिन्छ। तसर्थ, Isetan पुरुष र महिला बीच लोकप्रिय छ।
इसेटानको बारेमा, मैले निम्न लेखमा परिचय पनि दिएँ।
टोकियो मेट्रोपोलिटन सरकारी कार्यालय भवन (Shinjuku)
टोकियो मेट्रोपोलिटन भवन टोकियो, जापान मा। भवनमा टोकियो महानगरपालिकाको मुख्यालय रहेको छ, जसले २ w वडा र नगरपालिकाहरू चलाउँछ। = शटरस्टक
टोकियो मेट्रोपोलिटन सरकारी कार्यालय भवन जेआर शिन्जुकु पश्चिम वेस्ट एक्जिटबाट १० मिनेटको दूरीमा अवस्थित गगनचुम्बी भवन हो। यो पहिलो सरकारी भवन (उचाई २10. m मीटर, stories stories कथाहरू) र दोस्रो सरकारी भवन (उचाई १ 243.4..49 मीटर, stories 163.3 कथाहरू) समावेश गर्दछ। तपाईं पहिलो कार्यालय भवनको th 34 औं तला (उचाई २०२ मीटर) मा अवलोकन कोठामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो सरकारी भवनको माथिल्लो भाग दक्षिण र उत्तर भवनहरूमा विभाजित छ। दुबैसँग अवलोकन कोठा छ। दक्षिण अवलोकन कोठाबाट (खुल्ने समय 9: -30०-१-17: )०) तपाई टोकियो खाडी राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, शहरको केन्द्रको रातको दृश्य उत्तर अवलोकन कोठाबाट राम्रो छ (:: --० - २:: ००)। उत्तर अवलोकन कोठामा एक बार र क्याफे पनि छ।
यस भवनको अवलोकन कोठाबाट शिन्जुकुमा उस्तै उचाइ भएका भवनहरू नजिक छन्। तपाईं स्पष्ट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं गगनचुम्बी भवनहरूको जंगलमा हुनुहुन्छ।
दुबै अवलोकन कोठाको पहिलो तलाबाट सिधा लिफ्ट छ र seconds 55 सेकेन्डमा आइपुग्छ। अवलोकन कोठामा प्रवेश निःशुल्क छ।
>> टोक्यो महानगर सरकारी कार्यालय भवनको विवरणको लागि, कृपया टोकियोको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
समुराई संग्रहालय (शिन्जुकु)
टोकियो, जापान = शटरस्टकमा समुराई संग्रहालयमा जापानी समुराई कवचहरूको प्रदर्शनी
समुराई संग्रहालय एक छोटा संग्रहालय हो जुन १० मिनेट जति JR Shinjuku स्टेशन पूर्व बाहिरिबाट पैदल दूरीमा स्थित छ। यस संग्रहालय को वरपर एक व्यस्त डाउनटाउन क्षेत्र हो। जे होस्, तपाई संग्रहालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै धेरै समुराई आर्मर र हेलमेटहरू प्रदर्शनमा छन् र शान्त संसार फैलदैछ। तपाईं वास्तवमा एक समुराई आर्मर र हेलमेट लिन सक्नुहुन्छ र जापानी तरवारको साथ तस्वीर लिन सक्नुहुनेछ (वास्तवमा विच्छेद गर्न नसक्ने प्रकार)। यो संग्रहालय विदेशी पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ।
जापानमा समुराई र निन्जासँग सम्बन्धित धेरै संग्रहालयहरू र थिम पार्कहरू छन्। ती मध्ये यो समुराई संग्रहालय टोकियोमा सजीलो पहुँच गर्न सकिने दर्शनीय स्थलको रूपमा सिफारिस गरिएको छ। समुराई संग्रहालयको लागि, मैले निम्न लेखमा प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसैले कृपया तपाईंलाई रुचि छ भने कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
रोबोट भोजनालय (शिजुकु)
प्रदर्शन र अभिनेताहरु, अभिनेत्रीहरु र रोबोट रेस्टुरेन्टमा एक रोबोटको समयमा शानदार रोबोटको साथ परेड। टोक्यो, जापान मा Shinjukunishiguchi जिल्ला = शटरस्टक
विदेशबाट आएका ग्राहकहरूको लागि शिञ्जुकु पछाडिको मनोरञ्जन जिल्ला कबुकिचोमा एक पछि अर्को नयाँ दर्शनीय ठाउँको जन्म भएको छ। रोबोट भोजनालय ती मध्ये एक हो। यो रेस्टुरेन्ट माथिको समुराई संग्रहालयको नजिक अवस्थित छ।
रोबोट भोजनालय खाने ठाउँको सट्टा अर्कै प्रदर्शनहरूको आनन्द लिने ठाउँ हो। अवश्य पनि, रोबोटहरू देखा पर्छन्, तर थप विभिन्न नर्तकहरूले गाउँछन् र नाच गर्छन् र कार्यक्रम स्थललाई उत्तेजित गर्छन्। यस रेस्टुरेन्टमा जापानी ड्रमजस्ता धेरै जापानी शैलीको प्रदर्शन छ, यस रेस्टुरेन्टलाई विदेश देशबाट आएका आगन्तुकहरूको बीचमा राम्रो प्रतिष्ठा छ।
मैले निम्न लेखमा रोबोट रेस्टुरेन्ट प्रस्तुत गरें। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
गोल्डन Gai (Shinjuku)
Shinjuku गोल्डन Gai मा परम्परागत फिर्ता सडक बार। गोल्डन gai मा २०० साना बारहरु र २० औं शताब्दी वातावरण संग t साना गलियों हुन्छ, लो = Tokyoshutterstock मा उद्धृत
गोल्डन Gai को मानचित्र, Shinjuku
* माथिको नक्शामा क्लिक गर्नुहोस् एक अलग पृष्ठमा गुगल नक्सा प्रदर्शन गर्न।
गोल्डन Gai (गोल्डन जिल्ला) Shinjuku Kabukicho 1 chome मा एक पुरानो र संकीर्ण जिल्ला हो। साना काठ घरहरू बाक्लो छन्। यहाँ २०० भन्दा बढी बारहरू खुल्ला छन्। प्रत्येक पसलको आकार केवल १० वर्ग मीटर छ।
गोल्डन गायले शिन्जुकुको छाया छोड्छ जुन दोस्रो विश्वयुद्ध पछि ध्वस्त भयो। यदि तपाईं यस क्षेत्रमा जानुभयो भने तपाईंले years० बर्ष भन्दा धेरै पहिले जापानमा पछाडि फर्केको महसुस गर्नुहुनेछ। यो रेट्रो जिल्ला अब विदेशी पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ।
यस जिल्लामा, रेष्टुरेन्टहरू पहिले भीड भए, जहाँ वेश्यावृत्ति भइरहेको थियो। वेश्यावृत्ति निषेध पछि, पट्टीहरू एक पछि अर्को खुल्यो। यद्यपि शिन्जुकुमा पुनर्विकासको पदोन्नति गरिएको थियो, तर पसलहरूले यस जिल्लामा पुनर्विकासको प्रतिरोध गरे र ती जिल्लामा उनीहरूको पसलहरूलाई द्रुत रूपमा सुरक्षित गरे।
धेरै गोल्डन गे दुकानदारहरु अद्वितीय छन्। मानिसहरु जसले उनीहरु लाई जम्मा गरे। प्रसिद्ध चलचित्र निर्देशकहरू र अभिनेताहरू पसल मालिकको फिल्ममा परिचित थिए। लेखक र मिडिया सम्बन्धित अधिकारीहरू एक दुकान मालिक बार मा भेला भए जो उपन्यासहरू मन पराउँछन्। यस तरिकाले, गोल्डन गायमा एक अद्वितीय सांस्कृतिक वातावरणको जन्म भयो।
म गोल्डन स्ट्रिटमा पनि धेरै पटक आएको छु। धेरै सानो बारमा मैले पसलहरू र वरपरका पाहुनाहरूसँग फिल्मको बारेमा कुरा गरें। हालसालै, गोल्डन Gai काफी परिवर्तन भएको छ। विदेशी पर्यटकको संख्या बढेको छ, र नयाँ पसलहरूको संख्या बढेको छ। भविष्यमा यो जिल्ला कसरी बदलिनेछ भनेर म पर्खाइमा छु।
गोल्डन Gai मा एक राम्रो समय प्राप्त गर्न को लागी, तपाइँ केहि चीजहरु मा विचार गर्नु पर्छ। पहिले, कृपया ठूलो संख्याको समूहको साथ यो जिल्लामा नजानुहोस्। किनकि प्रत्येक पसल साना छ, केहि मानिसहरु द्वारा जान चाहानुहुन्छ। दोस्रो, एउटा स्टोरमा लामो समयसम्म बस्दैनौं। केवल केही ग्राहकहरु पसलमा प्रवेश गर्न सक्छन्। त्यसैले कृपया अर्को अतिथिहरूलाई भित्र राख्न सावधान रहनुहोस्। यदि तपाईं पसलहरू र वरपरका पाहुनाहरूसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई अर्को पसलमा जान सिफारिस गर्दछु। धेरै पसलहरूको मजा लिनु यस क्षेत्रमा रमाईलो गर्ने तरिका हो।
गोल्डन Gai JR Shinjuku स्टेशन पूर्व निकास को बारे मा 10 मिनेट को दूरी मा छ।
पसलहरूमा तपाईलाई पेय शुल्क बाहेक टेबल शुल्क पनि लिन सकिन्छ। चार्ज शुल्क प्रति व्यक्ति 500०० येनदेखि १००० येन हो। यद्यपि भर्खरै खोलिएका स्टोरहरूमा तपाईंलाई शुल्क लगाइन सकिदैन। एक पेय अर्डर अघि पुष्टि गरौं।
जापान = शटरस्टक, शिबुया, टोकियो, मा मेइजी श्राइनमा काठका फाटकहरू प्रवेशद्वार हेर्नुहोस्
मिजी जिingu्गु श्राइन पूर्वी टोकियोको विशाल मन्दिर हो। साइट, आकार को बारे मा hect 73 हेक्टर, ज wood्गलले ढाकिएको छ। यदि तपाईं यस मन्दिरमा जानुहुन्छ भने तपाईं जंगलमा गहिरो मौनताको समय अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
Meiji Jingu Srine, तपाईं JR Yamanote रेखा को Harajuku स्टेशन बाट हिंड्न सक्नुहुन्छ। मुख्य हलको प्रवेशद्वारमा ठूलो तोरी गेटबाट, तपाईं जंगलमा सडकमा १० मिनेट सम्म हिड्नुहुन्छ। मुख्य मन्दिरमा, यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तपाईं शिन्टो शैलीको विवाह देख्न सक्नुहुनेछ।
मेजी जिंगु तीर्थ असकुसाको सेन्सोजी तीर्थको साथ लोकप्रिय मजार हो। जबकि सेन्सोजी तीर्थ व्यस्त शहरमा छन्, मेजी जिingu्गू श्राइन भीडबाट अलग्गिएको पवित्र जंगलमा छन्। यी तीर्थक्षेत्रहरू धेरै फरक छन्, तर दुबै आकर्षक छन्।
मेजी जिingu्गु शिरीनको बारेमा, मैले निम्न लेखमा विस्तारपूर्वक परिचय दिएँ। कृपया ध्यान दिनुहोस् यदि आपत्ति छैन भने।
>> १२ जापानमा सर्वश्रेष्ठ मन्दिर र तीर्थहरू! फुशिमी इनारी, कियोमिजुडेरा, तोडाइजी, आदि।
>> फोटोहरू: मेजी जिंगु तीर्थ - विशाल वनको साथ टोकियोमा सबैभन्दा ठूलो मन्दिर
टोकियो मा Jingu Gaien = शटरस्टक
मेजी Jingu Gaien (सामान्यतः Jingu Gaien को रूप मा चिनिन्छ) Meiji तीर्थ मन्दिर को बाहिरी बगैचा हो। त्यहाँ बेसबल मैदान जस्ता खेल सुविधाहरू छन्, र धेरै मानिसहरू छुट्टिहरूमा भीड हुन्छन्।
र यहाँ जापान मा केहि सुन्दर ginkgo रूखहरु छन्। शरद Inतुमा, जिन्कगो रूखहरू पहेंलो हुन्छ र धेरै सुन्दर हुन्छ। नजिकैको स्टेशनहरू "Gaien-mae" र Goza सबवे लाइनमा "Aoyama 1-chome" हुन्। अओयामा टोकियोको सब भन्दा फैशनेबल क्षेत्रहरू मध्ये एक हो, त्यसो भए किन यस क्षेत्र वरिपरि टहल लिने छैन?
तपाईं Ginnen-mae मा Ginkgo रूखहरूको बारेमा थप लेखहरू तल लेखहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ।
>> फोटोहरू: Jingu Gaien - जिन्कगो रूखहरूको साथ सुन्दर पैदल मार्ग
हराजुकुको तक्शिता सडकमा क्रेप र आइसक्रीम विक्रेता, यसको लागि रंगीन पसलहरू र पंक मa्गा = शटरस्टकको लागि परिचित छ
Harajuku युवा मानिसहरु को लागी एक धेरै लोकप्रिय शहर हो। यस शहरमा सँधै जापान भरिका किशोर किशोरीहरू रहन्छन्।
Harajuku Shinjuku र Shibuya बीच स्थित भएको कारण, Shinjuku र Shibuya संग दर्शनीय धेरै मानिसहरू छन्।
Harajuku मा सबैभन्दा लोकप्रिय क्षेत्र "Takeshita Street" हो। Takeshita Street जेआर Harajuku स्टेशन बाट एक मिनेट पैदल छ।
यो सडक करिब 350 11० मिटरको लम्बाई हो, र ११:०० देखि १:00:०० दिन सम्म कार प्रवेश गर्न सक्दिन र पैदल यात्रु बन्छ। सडकको दुबै छेउमा धेरै राम्रा फेसन पसल र सौन्दर्य प्रसाधन पसलहरू छन्, त्यसैले केटीहरूले समय बिर्सिन्छन् र किनमेलमा रमाउँदछन्। प्यारा क्रेप पसलहरू पनि केटीहरूमाझ लोकप्रिय छन्।
विदेशी पर्यटक पनि यहाँ बढ्दो छ। टकेशिता सडकको वरिपरि हिंडिसकेपछि, त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू पनि छन् जसले टकेशिता सडकमा १०० येन पसल "डेइसो" मा किनमेल गरिरहेका छन्।
यदि तपाईं जेआर हाराजुकु स्टेशनबाट ताकेशिता सडकमा जानुहुन्छ र त्यस्तै सडकमा हिंड्नुभयो भने, त्यहाँ अन्तमा त्यहाँ मुख्य सडक (मेजी स्ट्रिट) छ। त्यहाँ एक शपिंग मल्ल "Laforet Harajuku" मुख्य सडकको साथ युवाका लागि फेसनमा विशेष छ। यो ठाउँ पनि धेरै लोकप्रिय छ। त्यस पछाडि, ओमोटেসान्डोको सुन्दर रूखले भरिएको सडक फैलदैछ।
लक्जरी ब्रान्ड स्टोर र अन्य ओमोटेशान्डो, टोक्यो = AdobeStock मा लाइन
"Omotesando" सडक को क्रिसमस रोशनी को दृश्य। Zelkova रूखहरू सुनको बल्बले र colored्गाइएको छ र शहर चम्किन्छ, टोकियो, जापान = शटरस्टक
ओमोटेशान्डो मेजी जि J्गु तीर्थको लागि अग्रणी दृष्टिकोण हो जुन २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा मन्दिरको निर्माणसँगै निर्माण गरिएको थियो। सही हुनको लागि, यसले १.१ किलोमिटर लम्बाई बोल्भार्डलाई "ओमोट्सन्डो चौराहे" बाट मेजी जिingu्गू "जिingu्गू-बाशी क्रसिंग" को प्रवेशद्वारलाई जनाउँछ। ओमोटेसन्डो चौराहेमा, मेइजी जिingu्गूको प्रवेश द्वारको रूपमा दुबैपट्टि ठूलो ढु stone्गाको लालटिन स्थापित गरिएको छ। यस अवसरको दुबै तिर, Zelkova रूखहरू लगाइएको छ। सुरुमा लगाइएको अधिकांश Zelkova रूखहरू दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान हवाई आक्रमणको साथ जलाइएको थियो। वर्तमान zelkova रूखहरू युद्ध पछि रोपेको थियो।
यद्यपि हालसालै हाराजुकुको लोकप्रियता बढ्यो, त्यसैले मेजी तीर्थनको नजिकको क्षेत्रलाई हाराजुकूको रूपमा मानिन्थ्यो। सामान्यतया, "ओमोट्सान्डो" ले अक्सर ओमोट्सन्डो चौराहेदेखि "जिing्गुमे चौराहा" लाई जनाउँछ जहाँ लाओफर्ट हाराजुुकु अवस्थित छ।
यो "ओमोटेशान्डो" टोकियो प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्दर रूखले-लाइनरेन एवेन्यू हो। यस सडकले धेरै विदेशी ब्राण्ड कम्पनीहरु इत्यादि बाट ध्यान लिएको छ। फलस्वरूप, फेसनशील उच्च ब्रान्ड पसलहरू झन् झन् बढ्दै गइरहेका छन्।
यो ओमोटेशान्डो ल्याण्डमार्क २००aमा खोलिएको जटिल "ओमोटेशान्डो हिल्स" हो। यो सुविधा (ground फ्लोर माथिको र base बेसमेन्ट फ्लोर, कूल फ्लोर एरिया, 2006,०3 square वर्ग मिटर) एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट टाडाओ एन्डो द्वारा डिजाईन गरीएको थियो। परिदृश्यलाई नोक्सानी नपार्न यो तल्लो उचाइ भएको भवन भएको छ। ओमोटेशान्डो हिल्समा वर्तमानमा करिब १०० ब्रांडेड पसलहरू छन्।
ओमोटेशान्डोमा, क्रिसमसको अवधिमा, जेल्कोवा रूखहरू सजावट गरिन्छ र उत्कृष्ट रोशनी सुरु हुन्छ। Omotesando एक साँच्चै सुन्दर र स्टाइलिश क्षेत्र हो। यदि तपाई हाराजुुकुमा आउनुहुन्छ भने ओमोटेशान्डोमा पनि भ्रमण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
ओमोटेसन्डो पछाडि, हरियोले भरिएको अओयामा क्षेत्र फैलदैछ। Aoyama क्षेत्र धेरै ब्रान्ड शपको साथ एक धेरै फेसनल शहर पनि हो।
यदि तपाइँ टोकियोका एक व्यक्तिलाई सोध्नुहुन्छ, "टोकियोको सब भन्दा फेसनबल शहर कहाँ छ?", धेरै व्यक्तिले यो ओमोटोसेन्डो हो भन्न सक्दछन्। हुनसक्छ गिन्जा बुढा मानिसहरूका बीच लोकप्रिय हुन सक्दछ, तर कम्तिमा पनि युवाका लागि ओमोट्सन्डो, नजिकैको हाराजाकु, शिबुया र अओमा सबैभन्दा प्रशंसनीय मध्ये एक हो ...
टोकियो, जापानमा ट्वाइटलाईटमा शिबुया क्रसिंग शीर्ष दृश्यबाट
टोकियो, जापानको शिबुया जिल्लामा मारियो कार्ट। शिबुया क्रसिंग विश्वको एक व्यस्त क्रसवाक हो = शटरस्टक
शिबुया एक ठुलो शहर हो जहाँ युवाहरू भेला हुन्छन्। यो शहर सिन्जुकु र Ikebukuro संग पूर्वी टोक्यो प्रतिनिधित्व शहरको क्षेत्र हो। त्यहाँ JR Shibuya स्टेशन अगाडि अकिता कुकुर "Hachiko" को एक मूर्ति छ, र त्यो भन्दा पहिले माथिको फोटो र चलचित्र मा एक विशाल हावामा चौराहे देखिएको छ। मलाई लाग्छ कि यो सायद विश्वको सबैभन्दा व्यस्त चौबाटो हो।
शिबुया हालसालै विदेशी पर्यटकहरूका बीच धेरै लोकप्रिय भएको छ। उनीहरूका लागि उत्तम पर्यटक आकर्षण यो भत्काइएको चौराहा हो। यो चौराहेमा, पैदल यात्रीहरू कुनै पनि दिशामा हिंड्न सक्छन्। जब पैदल यात्रीहरूको लागि संकेत निलो हुन्छ, पदयात्रीहरूको ठूलो संख्या तिनीहरू एकैचोटि जान चाहेको दिशा तिर हिंड्न थाल्छन्। यद्यपि तिनीहरू दुरलै टकराउँदछन् र एक अर्कालाई मार्ग दिईरहेको बेला तिनीहरू यस चौराहेबाट राम्रोसँग पार गर्न सक्दछन्। त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू यो दृश्यको फोटो लिइरहेका छन्।
मैले एउटा अखबारको लेख लेखेको छु धेरै विज्ञलाई अन्तर्वार्ता लिदै किन जापानीहरूले सफलतापूर्वक यस चौराहे पार गर्न सक्दछ। त्यस समयमा टोकियो संस्कृतिका एक विशेषज्ञले भनेका थिए, "टोकियोका मानिस टोकुगावा शोगुनेटको समयदेखि नै उच्च जनसंख्या घनत्व भएको ठाउँमा बसोबास गर्थे। त्यस्तो शहरमा शान्तिपूर्वक बस्नको लागि तिनीहरूले आपसी सहुलियतको बानी सिकेका छन्। "
जापानमा, त्यहाँ त्यस्तो समय थियो जब समुराईले १ 16 औं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म लडे, तर १th औं शताब्दीको सुरूदेखि नै लामो र शान्तिमय युग जारी रह्यो। यस शान्तिमय युगमा जापानीहरूले नम्र भावना र हार मान्ने भावनाको पोषण गरेका छन्।
शिबुयामा चौराहा अवलोकन गर्न सब भन्दा राम्रो ठाउँ भनेको स्टारबक्स कफी SHIBUYA TSUTAYA पसल हो जुन यो चौराहेको अनुहार हो। तपाईं यो स्टोरको ठूलो विन्डोबाट यो छेदन देख्न सक्नुहुन्छ।
शिबुया मार्क सिटीबाट जेआर शिबुया स्टेशन जाने बाटो पनि यो चौराहे अवलोकन गर्नका लागि एक उत्तम ठाउँ हो। यो ग्लास गरिएको छ र तपाईं माथि तिर विकर्ण बाट देख्न सक्नुहुन्छ।
टोक्यो, जापान = शटरस्टकमा शिबुया क्रसरोड नजिकको सडकमा फेसन विज्ञापनको लागि केटीहरूको समूह सडकको बीचमा पोष्ट गर्दैछ।
टोकियोका युवाहरू शिबुया मन पराउँछन्। Shibuya एक शपिंग शहर को रूप मा Shinjuku भन्दा सानो छ। Shinjuku मा इसेटान जत्तिकै कुनै राम्रो उच्च-श्रेणी डिपार्टमेन्ट स्टोर छैन। जे होस्, त्यहाँ Shibuya मा युवा मानिसहरूलाई स्वीकार गर्न रहस्यमय हावा छन्। र शिबुयामा त्यहाँ युवाका लागि धेरै पसलहरू छन्। र त्यहाँ एकै उमेरका धेरै युवाहरू छन्। त्यसैले युवाहरूले शिबुयाको भ्रमण गरेर राम्रो समय बिताउन सक्दछन्। शिबुयाको अनौठो वातावरण धेरै दशक पछि परिवर्तन भएको छैन। मलाई लाग्छ शिबुया एउटा सहर हो जुन जवान मानिसहरूसँग विकासको लागि जारी छ।
यद्यपि शिबुया एक सहर हो जुन जापानी युवा जनहरूका अन्धकारलाई पनि संवेदनशील ढंगले प्रतिबिम्बित गर्दछ। १ 1990 XNUMX ० को दशकमा मध्य विद्यालयका विद्यार्थीहरूको खेल खेल्ने प्रवृत्ति देखा पर्दा शिबुयाले मध्य विद्यालयका धेरै विद्यार्थीहरू राती अबेर भेला भएका थिए। मैले उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको छु। तिनीहरू धेरै सामान्य बच्चाहरू थिए, तर मैले दृढताका साथ महसुस गरे कि उनीहरू एकै समयमा परिवारबाट आशिष् नपाए।
हालसालै धेरै युवाहरू अक्टूबरको अन्त्यमा हेलोवीन अवधिमा शिबुयाको चौराहेमा भेला हुन्छन्। मलाई जापानी युवाहरूको अन्धकार यस ठाउँमा कतै आउँछ। जापानमा युवाहरुमा अहिले असमानता फैलिरहेको छ। म थोरै चिन्तित छु कि दिनदिनै सामाजिक तनाव महसुस गर्ने युवाहरूलाई जम्मा गरेर शिबुयामा अन्धकारको शक्ति पैदा हुनेछ।
शिबुया स्टेशन पूर्व बन्दको "Shibuya Hikarie" को निर्माण। त्यहाँ डिपार्टमेन्ट स्टोर, रेस्टुरेन्ट, अफिस, संगीत थिएटर, र यस्तै अन्य, टोक्यो, जापान = शटरस्टक छ
शिबुया स्ट्रिम भवन, शिबुया, टोक्यो, जापानमा एक नयाँ वाणिज्यिक र ल्याण्डमार्क हो = शटरस्टक
हालसालै शिबुयामा ठूला-ठूला निर्माणहरू यहाँ र त्यहाँ भइरहेको छ। यदि तपाई शिबुया जानुभयो भने तपाईले ठूलो भवन बनाउने साइट पाउनुहुनेछ। शिबुयामा अब एक पछि अर्को ठूलो भवनको जन्म भयो।
"शिबुया हिकारी" शिबुयामा लोकप्रिय नयाँ दर्शनीय स्थल हो। यो भवन जेआर शिबुया स्टेशनको पूर्वी निकासमा अवस्थित वाणिज्यिक सुविधा हो। यस भवनमा महिलाका लागि कपडा पसल, रेस्टुरेन्ट, व्यापक सह-कार्य गर्ने ठाउँ, थिएटर र आईटी कम्पनीहरूले माथिल्लो तलाहरू ओगटेका छन्। बेसमेन्ट फूड फ्लोरमा, त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू छन् जसले खाजा खाने बक्सहरू किन्छन् र टेबलमा खानेछन्।
२०१ 2018 को शरद Inतुमा, विकारीको एक जटिल शपिंग जटिल "शिबुया स्ट्रिम" हिकारीको नजिक पूरा भयो। यो गगनचुम्बी भवनमा शिबुया स्ट्रिम एक्सेल होटल टोकियु, कन्सर्ट हल र रेस्टुरेन्टहरू छन्। माथिको चित्रमा देखिएझैं स्टाइलिश सीढीहरू छन्।
Shibuya प्रयास गर्नुहोस्, कृपया यस शहरको गतिशील शक्ति महसुस गर्नुहोस्।
"एबिसु गार्डन प्लेस" सप्पोरो बियर कारखानाको परिसरमा निर्मित जटिल हो। डिपार्टमेन्ट स्टोर, अफिस भवन, रेस्टुरेन्ट, संग्रहालय र यस्तै = शटरस्टक
क्रिसमस रोशनीको येबिसु गार्डेन प्लेस, टोकियो, जापान = शटरस्टक
Ebisu हालै एक धेरै फेसनल शहर को रूप मा लोकप्रिय छ। यस शहरमा कुनै विशाल विशाल डिपार्टमेन्ट स्टोर छैन। यद्यपि त्यहाँ धेरै फेसनशील र स्वादिष्ट रेष्टुरेन्टहरू र विशेष पसलहरू छन् जस्तै उच्च गुणस्तरको विविध सामान र कपडा। त्यसो भए, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो ईबिसुमा बस्न चाहन्छन्। JR Ebisu स्टेशन जो यस शहरको बीचमा छ, यो JR शिबुया स्टेशनबाट १ स्टेशन हो।
Ebisu बगैंचा स्थान
JR Ebisu स्टेशन बाट १० मिनेट पैदल, त्यहाँ एक जटिल सुविधा छ "Ebisu गार्डन प्लेस" आकार 10२,82,366 square वर्ग मिटर। यहाँ उच्च वृद्धि कार्यालय भवनहरू, वेस्टिन होटल टोक्यो, टोक्यो मेट्रोपोलिटन म्यूजियम फोटोग्राफी र YEBISU GARDEN CINEMA। त्यहाँ एउटा सानो डिपार्टमेन्ट स्टोर "एबिसु मित्सुकोशी" र फ्रान्सेली रेस्टुरेन्टहरू "जोएल रोबचोन" भएको दरबार जस्तो सुविधा पनि छ।
मिशेलिन गाईडमा, "जोबल रोबचोन" मा "ल्याटेबल डु जोएल रोबचोन" रेष्टुरेन्टमा दुई तारा छन् र रेष्टुरेन्ट "गेस्ट्रोनोमी" जोल रोबचोनले तीन तारा जितेका छन्।
वेस्टिन होटल टोक्यो एक शान्त लक्जरी होटल हो। यस होटलमा हरेक दिन नास्ताको बुफे, मिठाईको बुफे आदि जपानमा सब भन्दा राम्रो हुन्छन्, जहाँसम्म मैले कभर गरेकी छैन। यहाँको सामान्य शेफ एकदम चतुर व्यक्ति हो।
टोकियो मेट्रोपोलिटन म्यूजियम फोटोग्राफ़ी राम्ररी परिचित छैन तर यो अद्भुत संग्रहालय हो जसलाई टोकियोले गर्व गर्नुपर्दछ। यो संग्रहालय सानो छ, तर फोटोग्राफी को विधा मा आश्चर्यजनक प्रदर्शनहरु एक पछि अर्को आयोजित गरीन्छ।
एबिसु गार्डन प्लेस चल्ती छैन। यद्यपि यो भन्न सकिन्छ कि परिष्कृत वयस्कहरू भेला हुन्छन्।
>> एबिसु गार्डन प्लेसका विवरणहरूका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
टोक्यो डिस्ने रिसोर्ट ओसाकामा युनिभर्सल स्टुडियो जापानको साथ सबैभन्दा लोकप्रिय थीम पार्क हो। यो टोकियोसँगैको चिबा प्रान्तको माकुहरी शहरको वाटरफ्रन्टमा अवस्थित छ।
टोक्यो डिज्नी रिजोर्ट टोकियो डिज्नी ल्याण्ड र टोकियो डिज्नी समुद्री को हुन्छ। यी दुई थिम पार्कहरूको बाहेक, त्यहाँ शपिंग मल्लहरू र सिधा व्यवस्थित होटलहरू छन्। वरपरको क्षेत्रमा धेरै रिसोर्ट होटलहरू पनि छन्।
टोकियो डिज्नी रिजोर्ट विश्वभरि डिस्ने सम्बन्धित थिम पार्कहरू मध्ये एक धेरै सफल पार्क हो। यदि तपाईं टोक्यो डिस्ने रिजोर्टमा सबै लोकप्रिय आकर्षणहरू अनुभव गर्ने योजना गर्नुहुन्छ भने, यो २- days दिनको लागि पर्याप्त छैन।
टोक्यो डिज्नी रिसोर्टको सिफारिश गरिएको आकर्षणको बारेमा, मैले निम्न लेखमा प्रस्तुत गरें। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका लेखलाई पनि सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं टोकियो डिस्ने रिजोर्टमा जानुभयो भने, सम्भव भए तपाईंले टोकियो डिस्ने रिसोर्टको नजिक भएको ठाउँमा होटल भेट्टाउनुहुनेछ। यदि तपाईं टोकियो डिस्ने रिसोर्टबाट टाढा होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईंले व्यवसायिक मानिसहरूसँग भव्य ट्रेन लिनु पर्छ जो बिहान र साँझ सहरको केन्द्रमा जान्छन्।
म सुझाव दिन्छु कि तपाईं टोकियो डिस्ने रिजोर्ट वा तिनीहरूको आधिकारिक होटेलको स्वामित्वमा रहेको होटलहरूमा बस्नुहोस्। टोकियो डिस्नेसीमा यी होटेलहरू मध्ये सब भन्दा लोकप्रिय होटेल “टोकियो डिस्नेसी होटल मिराकोस्टा” हो। यो होटल चाँडै रिजर्भेसनले भरिन्छ, तर धेरै रद्दता तोकिएको आवास मिति भन्दा लगभग १ महिना देखि देखापर्नेछ। यदि तपाईं यो समयमा रिजर्भ गर्नुहुन्छ भने, यस्तो सम्भावना छ कि तपाईं यस होटलमा बस्न सक्नुहुन्छ।
>> टोक्यो डिज्नी रिसोर्टको विवरणहरूको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
>> नरिता एयरपोर्टका लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
>> हनेडा एयरपोर्टका लागि, कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
>> स्थानान्तरणका लागि, कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
>> कृपया आवासको बारेमा यो लेख पढ्नुहोस्